Brezila: Adihevitra Momba Ny Fiterahana Natoraly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2012 4:49 GMT
Ho an'ny Fikambanana Iraisampirenena ho an'ny Fahasalamana dia 15% ny fiterahana ihany no tokony handalo fandidiana. Na izany aza, eo amin'ny sehatra tsy miankina Breziliana, maherin'ny 85% amin'ny fiterahana no mandalo fandidiana (sezarienina) ary eo aorian'i Chili avy hatrany no laharana misy an'i Brezila ao anatin'ny lisitr'ireo firenena izay matetika mampihatra ity dingan'ny fandidiana ity.
Tsy ela kory izay, ny hantsana goavana misy eo anelanelan'ilay isan-jato natolotra sy ny tena zava-misy dia niteraka adihevitra iray sy hetsi-panoherana tao Brezila, izay nahitàna ireo mafàna fo avy aminà fikambanana tahaka ny Parto do Princípio [pt], izay mandà ny fiterahana baikoin'ny drafitra fiahiana ara-pahasalamana. Tao amin'ilay hetsi-panoherana, nokiahan'ireo mafàna fo ny hoe: “Dokotera, aza manadala ahy ianao. Natao [mba] hampanankarena anao ny fandidiana ” Caesarians”.
Ny Diaben'ny Fiterahana an-Trano [pt] dia natao tany aminà tanàna efatra tao amin'ny faritra, taorian'ny fanakianan’ ny Filankevi-paritra momba ny Fanafody ao Rio de Janeiro (Cremerj) an'i Dr Jorge Kuhn, ilay mpandrindra ny departemantan'ny fampiterahana ao amin'ny Anjerimanontolo Federalin'i São Paulo, izay nisolo vava niaro [pt] ny fiterahana an-trano. Nanamafy i Kuhn fa ny fiterahana dia resaka ara-tsaina, fa tsy dingana ara-pitsaboana.
Ny kiana avy amin'ny mpitsabo dia nanosika an'ireo lehilahy sy vehivavy maro hifanentana hiaro ny zon'izy ireo hisafidy izay toerana hiterahana. Ny 17 Jona 2012, tany amin'ireo renivohi-panjakana tao Brezila no natao ny diabe: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) ary Vitória (ES).
Nidina an-dalambe ireo reny, zanakalahy, raim-pianakaviana, dadabe sy bebe ary mafàna fo maro mba hiaro ny fiterahana ara-boajanahary any Brezila. Vantany vao tonga tao amin'ny kianja Mário Covas ao amin'ny Avenida Paulista (Paulista Avenue) [pt], São Paulo, dia afaka ny hahita ankizy mandoko sorabaventy mivaky toy izao ianao : ” Izaho no mifidy ny toerana sy fotoana hahaterahako,” avy eny lavitra eny.
Mandritra ny fanaovan'ireo vehivavy ny diabeny any amin'ireo fari-panjakana samihafa ao Brezila, dia misy – ary toy izany hatrany- olona vitsivitsy izay mnihevitra fa tsy toe-tsain'olona matihanina mihitsy ny an'i Dr Jorge Kuhn, manindrahindra ny fahafatesana noho ny fiterahana an-trano ho porofon'ny fampiharana io fomba fanao io. Ity fepetra ity dia nolanian'ny filankevi-paritry ny fitsaboana, nahitàna ny Cremesp ao São Paulo, izay nahitàna mpanao hetsi-panoherana manodidina ny 1.000 nanao diabe teo an-toerana.
Sary mifanohitra amin'ny hetsi-panoherana, ny mbola fipetrahan'ny tsy fitokiana amin'ny fiterahana an-trano. Ny ankamaroan'ny vahoaka Breziliana no tsy manana toera-ponenana ada-dalàna. Ao amin'ny Facebook ho an'ilay Home Birth March, Amélia Araújo nanontany hoe [pt]:
Hiteraka an-trano? Dia mba ahoana ny amin'ireo vehivavy miaina eny an-jorom-bala, izay tsy manana akory na dia ny farafaha-keliny amin'ny fepetram-pahadiovana fototra sy ny toeram-pidiovana? Ho sahy hiatrika an'izany ve ireo mpiasan'ny fahasalamàna? Ahoana ny mikasika ny fiterahana voajanahary any amin'ny hopitaly?
Mbola mirakitra be eny anivon'ireo vehivavy Breziliana tahotra ny hiteraka an-trano [pt] ary ny Kaomitin'ny Fahasalamana Ara-piterahana dia manasongadina fa ny fiterahana araka ny fomba voajanahary any amin'ny hopitaly no tsara indrindra sy safidy tsy tandindinin-doza.
Na izany aza, ny zava-misy amin'ny fiterahana araka ny fomba voajanahary any amin'ireo hopitalim-panjakana – indrindra fa ireo tsy miankina – ao Brezila dia tsy mifandray velively amin'io idealy io satria ny herisetra eo am-piterahana no isan'ny iraygoavana indrindra amin'ny fihetsika tsy manaja ny zon'ireo vehivavy Breziliana. Ny vokatra avy amin'ny hetsika bilaogy itambaram-be, The Obstetric Violence Experiment, izay navoakan'ny [pt] fikambanana Fiterahana ao Brezila, dia namoaka ho fanta-bahoaka ny herisetra amin'ny alàlan'ny teny izay toy ny zavatra iainana isan'andro mandritra ny fotoana mampihetsi-jaza, vao mainka manaporofo ny endrika tsy maha-olombelona ny rafitra ara-pahasalamana ao Brezila.
Ny tsy fahampian'ny fampahafantarana noho ny maha-tsy zarizary ny sampana mpikarakara ny fitondràna vohoka any amin'ny faritra maro ao Brezila no sakana amin'ny fametrahana fomba fanao izay manaja ny zon'ireo vehivavy hisafidy. Ireo fandaharanasan'ny governemanta toy ny “Mãe Paulistana” [pt], napetraka tamin'ny 2006 tao amin'ny kaominin'i São Paulo izay ny tanjony dia ny hanohana ireo vehivavy bovohoka mandritra izany fotoana itondran-dry zareo vohoka izany, dia nampiseho fivoarana teo amin'ny fitomboan'ny fijerena manokana natao ho an'ny fampiterahana, saingy mbola lavitra azy ny ho lasa politika ankapobeny.
Ery ampitan'izay tsy fahampian'ny fijeren'ny mpitarika sy fanaovana zinona hita ao anatin'ny politikan'ny fiahiana ara-pahasalamàna izay, ireo mpandray anjara tamin'ilay diabe dia niaro ny zo hifidy, mifototra amin'ny porofo ara-tsiantifika, ka mba ho azo eritreretina ny hampety ny fiterahana araka ny fomba voajanahary ao Brezila. Ho an'ireo mpandray anjara, tokony hisy hatrany ny fanajàna ny fizakantenan'ny vehivavy na izany any an-trano na any ami'ny hopitaly, ary ny fiterahana an-trano dia tokony ho azo atao saingy any amin'ny toerana izay mahafeno ny fepetra ilaina ho amin'izany, ho an'ireo vehivavy tsy manana olana tamin'ny fitondrana vohoka, izany hoe kely kokoa ny loza mitatao aminy. Hahafinaritra kokoa ny hamela ny vatana be herim-pon'ny vehivavy hiasa araka ny lalàn'ny natiora, manaraka ny baikon'ny tenany ihany, mamela antsika koa hifampizara izany fotoana manokana izany miaraka aminy.